FAQ – DHALASHADA | DAL LAWE | JumaMap
Waxan ahay qaxooti ma codsan karaa dhalashada Talyaniga?
Haa, Waxad ku dlaban karta degenansho (SI DABIICI AH)
Waxa la iska rabo:
Degenansho ugu yaraan shan sano ah gudaha Talyaniga;
Sijoorno cadeeneyso in aad qaxooti rasmi ah tahay(ama warqada cusbooneysinta sijoornada)
Koobi warqadi laguugu aqoonsaday qaxootinimada;
Warqada la dhaho(Atto di notorietà), tasoo ku saxiixan kuna shaabadeysan magaca maxkamada ama komuunka oo buuxineysa booska mida dhalashada ee wadankaga;
Dhaqaliihi kuso galay sadexdi sane u danbeysay
Waxan heesta sharciga loo yaqan Susidiyaariyaha, ma dalban kara dhalashada?
Degenansho ugu yaraan toban sano ah gudaha Talyaniga;
Sijoorno cadeeneyso in aad Susidiyariya heysatid (ama warqada cusbooneysinta sijoornada)
Warqada loo yaqan (Atto di notorietà) taso ku saxiixan kuna shaabadeysan maxkamda ama komuunka ama shahaadada dhalasho ee wadankaga.
Si aan u dalbado dhalashada maxan sameyaa?
Si aad u dalbato dhalashada Talyaniga wa in ad marka hore furataa SPID. Furitaanka SPID waa bilaash waxana furi karo xarumo loo ogolyahay oo kaliya. (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ) si aad isku diwan galiso waxad u bahantahay: ciwan email, nambar telefoon, sharci shaqenayo, caarka caafimaadka oo anan dhacsanen.
Gudaha u gal bortalaha http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online ku dhufo meha eey ku qorantahay ku gal SPID ‘Accedi con Spid’
Buux buuxi foomka guud adigo galinayo dhaman waxa uu ku weydiiyo:
Sharciga laguugu aqoonsanayo;
. Warqada cadeneyso dhalashada ee ad ka kentay maxkamada ama tan wadankaga;
Shahaadada luqada talyaniga, Wana in eeysan ka yaraan B1 kaso baxday QCER (kuma jiran kuwa laga rabo kuwa ku jiro sharciga qodobka . 4 bis sida ku cad yadana sharciga la tix galiyay 25 luulyo 1998, n. 286, ama ckan heysto sijoornada EU taso ka dhigan in luuqadiisa horay looo hubiyay sida ku cad sharciga qodobkisa 9 kiisa ugu dnabeeyo);
warqadi aad kuso bixisay lacagta euro 250,00 ah ee la iska rabo.
Marka da boolo 16 euro ah si aad u dhameestirto dirista kadib barefetuurada ayaa balan kuso diri doonto.
Waxaan guursaday qof heysto dhalasho talyani ah ana ma qadan kara?
Haa, walagu qadan kara guur nuuc walba oo sijoorno oo aad wadatidna waxba iskama badalayaan xita hadi aad tahay (qaxooti dalbade anan weli helin sharci)
degenanso ugu yaran labo sano ah oo gudaha dalka ama sadex sano oo ka bilabato taariiqda guurka hadi ad dalka banankisa jogtan.
FIIRO GAAR AH: Shurudaha wa eey sii yaradan sahladana marka eey ilmo meesha jogan oo aad isku dhashen.
Barashada kuqada talyaniga (ugu yaraan B1)
Wakuma dal lawe?
Dal lawe (waa eray asalkisa girig ah kana yimid magalo laawe”) waa rag ama dumar qof anan heysan wax dhalasho wadan ah dhaman dunida. Qaarkood waa qaxooti lakin qaxootiga dhan ma aha dal lawe yaal, qaarkood weligood xuduud kale maka gudbin.
Side lagu noqda dal laawe?
In aad dal laawe noqota ma aha wax aad dooqaneyso ama aad rabooto ee waa mid ka mid ah shurudaha hoose:
Hadi aad tahay ilmo eey dhaleen kuwo anan dal lahee, ama aad qadan weysay magaca waalidka;
Hadi aad ka mid tahay urur loo diiday dhalasho sabab cunsurinimo
Hadi ad tahay qaxooti dalkiisa la qabsaday ama awood militari;
Sababo kala duwan hadi wadanki ad dhalashadisa heystay la bur buriyay sida (wadnaki la oran jiray Urss ama kii Jugoslafiya);
Hadi eey is qaban wayaan shurucda dhalasho ee wadanka ad jogto.
Yaa aqoonsan dal laaweyaasha?
Talyaniga waxa ka jiro 2 nuuc oo lagu qaabili karo kuwa anan dal heysan.
Mid dhaqaaale ahaan ah waxad direysa warqado aad ku codsaneyso in lagu aqoonsado in adan dal laheen waxana u direysa wasarada arimaha gudaha aidgo diraayo sharciyadan:
Warqad maxkamada laga sameyay oo dhalasho
shahado cadeneyso degenansha iyo koobi sharciyeysan
sharci walba oo caden karo in adan dal heysan(tusale, in ad kentid warqad caden ah safarada wadanka ad ku dhalatay, ama midki u dnabeyay ee aad degenansho ka yelatid taso cadeneyso inadan wadankaas dhalasho ku laheen).
Hadi aad wadid sharci ama warqad wadan kale ah wa in aad soo turjunta soona sharciyeysa,
Xafiiska waxa uu aqoonsan kara in adan dal lahen marka kento dhaman sharciyadi lagu weydiyay
Waqtiga eey qadato inta badan: labo sano
Hadi codsigada lagaaso diido codsigada waxad mar kale hor tagi karta xaakim maxkamadeed (procedimento giudiziario)
Goalka xaakimka sharciyeysan Waxa loomari kara kaliya marka aad wadato looyar, dhaqalaha hadi aadan awoodina dowlada ayaad weydiisan karta in eey kaa sacido.
Diyaarinta xogta qeybta looyarka.
Codsigada waxaa la geynayaa xafiiska qaabilsan soo galootiga iyo qaxootiga kasoo baari doono hubina doono kadibna u gudbinayo xaakimka goanka qadanayo.
Inta eey ii socoto codsiga diiwan galinta dal la an la ii aqoonsado ma helaya sijoorno an kusi joogo?
Sharciga waxa uu qoraya qofka anan dal heysan in la siin karo sijoorno kaliya marka uu horay u heestay mid kale. Kasoo gudub Kastuurooyinka qaar ayaa ayaga oo racayo sharciga qaxootiga ee New York ee la isku racay in la aqonsado kuwa anan dal lahen iyo kan UNHCR, waxeey siiyaan sijoorno xita hadi uusan mid kale horay u heesan lakin wa in uu cadeyaa ugu yaraan wax warqadana kenaa.
Maxa is badalayo hadi la ii aqoonsado dal lawe?
Talyaniga kuwa loo aqoonsado dal laawe yaal si sharci ah waxey xaq u leyihin caafimaad, shaqo, iyo beeshankaba waxey kalo leeyihiin:
Sijoorno dal laawe oo ku dhaceyso 5 sano